Refeyim isii nke osisi Copenhagen | Akụkọ Njem
Refeyim isii nke osisi Copenhagen
Maria | | Copenhague, Denmark
Foto | Olu si na mgbidi
Onwere ebe na Europe ebe anwansi di. N'ime ala Copenhagen bụ oke ọhịa ebe a ka nwere ike ịchọta ndị dike. Dị ka Odin, Thor ma ọ bụ Loki, ihe ndị a bụ akụkụ nke akụkọ ifo Norse na onye na-ese ihe bụ Thomas Dambo chọrọ ime ka ha bụrụ ihe okike ya site na imepụta ihe osise osisi pụrụ iche pụrụ iche nke jikọtara ya na oke ala Danish. Ruo otu ntabi anya, ndị gara ebe a nwere ike ịhapụ iche n'echiche ha na ha na-agagharị n'etiti ndị dike.
1 Olee otú akụkọ ahụ si malite?
2 Ozi dị aianaa ka ndị dike a nwere?
3 Esi achọta ha n'oké ọhịa?
3.1 Ihe egwuregwu Teddy
3.2 Oscar n'okpuru akwa
3.3 Louis na-ehi ụra
3.4 Ugwu Trop Tine
3.5 Obere tilde
3.6 Thomas na ugwu
Olee otú akụkọ ahụ si malite?
Na mbido afọ 2016 Dambo na ndị otu ya malitere ịkpụzi ọrụ a nke amụrụ site na mmasị ndị kansụl ime obodo na imepụta ihe ga-adọta uche ndị njem nleta na mpụga etiti akụkọ ihe mere eme nke Copenhagen. Dị ka onye na-ese ihe si kwuo n'onwe ya, na mbụ, a gwara ya ka ọ kpụọ ihe n'etiti obodo ndị ahụ mana ọ jụrụ, wee họrọ oke ọhịa nke mpaghara ahụ. Ya mere, mgbe o mere ka ha kwenye, ọ malitere iwu ndị dike isii nwere enyi nke were ha ọrụ karịa ọnwa isii. Ka ọ na-erule ngwụsị nke otu afọ ahụ, ndị Refeyim biworị n'ebe obibi ha.
Ozi dị aianaa ka ndị dike a nwere?
Foto | Akwụkwọ akụkọ Ether
Thomas Dambo ji osisi ndị a rụgharịrị mepụta ndị dike isii ya (ogige osisi, pallets ochie, osisi sitere na ndọtị ochie, na ihe ọ bụla ọzọ enwere ike iji mee ihe) na ihe ọ bụla yiri ya nke ọ nwere ike iji. N'ime ọrụ ya ọ bụghị naanị ya dịka o nwere nkwado nke ndị ọrụ afọ ofufo nọ n'ógbè ahụ bụ ndị na-ekerịta ọhụụ nke onye na-ese ihe na otu mmụọ-enyi na enyi. A sị ka e kwuwe, ndị dike isii a chọrọ ịkpali ndị mmadụ ka ha lekọta mbara ala nke ọma ma nyere aka gbasaa ozi banyere mkpa ọ dị imegharị.
Dambo kwenyere na ndị dike ya ga-anọ n'etiti afọ ise na afọ iri tupu ha amalite ịkwata. Emere ha ihe eji emegharia ma kwanyere ugwu ruo n’ókè nke ndị kasị ogologo n’ime ha, Tilde nke dị mita anọ na otu tọn na ọkara n’ịdị arọ, nwere ụlọ nnụnụ 28 n’ime. Ndị ọzọ buru ibu karịa, dịka Thomas nke dị mita iri na asaa n’ogologo, mana ọ naghị ebili ọtọ mana ọ na-eme ogologo.
Esi achọta ha n'oké ọhịa?
Teddy Friendly, Oscar Under The Bridge, Ihi ụra Louis, Little Tilde, Thomas On The Mountain na Hill Top Trine bi na nso obodo ndị dị ka Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund na Høje Taastrup, ha niile dị nso na Copenhagen. A na-ewepụta ọrụ ahụ dịka ịchọ akụ nke ndị ọbịa ga-achọpụta na enyemaka nke maapụ.
Ihe egwuregwu Teddy
Ihe ọkpụkpọ nke mbụ a bụ Teddy Friendly nke ejiri osisi mee, dị ka ndị ọzọ ise ahụ Thomas Dambo mere n'isi obodo Denmark. Maka owuwu ihe ọkpụkpụ a, ndị otu Thomas Dambo nwere enyemaka nke ụlọ ọrụ ọzụzụ mpaghara. Na ekele maka ọrụ ya, a kpọrọ dike a aha otu onye nkuzi. N'agbanyeghị oke ya, Teddy dị ka nnukwu anụ enyi nwere aji na ogologo aka na-eguzo n'akụkụ ọdọ mmiri.
Oscar n'okpuru akwa
Nke abụọ nke ihe osise bụ Oscar Under The Bridge ejiri osisi nke igwe mmiri mmiri ochie. A na-akpọ ọrụ ahụ aha onye omenkà si Chile bụ onye nyere aka na ọrụ ihe osise a nke dị n'okpuru akwa dị n'oké ọhịa.
Louis na-ehi ụra
Nnukwu nwoke Louis na-ehi ụra n'oké ọhịa dị nso na obodo Rodovre nke Denmark, n'etiti osisi na anụmanụ. Ihi ụra nke ihe ae kere eke dị omimi nke ukwuu nke na ọ na-ehi ụra n'ọnụ ya, nke mmadụ nwere ike isi na ya dabara. Iwulite ya Dambo na ndi otu ya n'oge a nwere mmekorita nke otu ndi oru aka ndi ntorobia site na otu oru nke na enyere ndi na enweghi oru aka inweta omuma tupu ha abanye na oru oru.
Foto | EterMagazine
Ugwu Trop Tine
Izu ike n’elu ugwu pere mpe na Hvidovre bi n’elu ugwu Top Trine. Ọ bụ otu n'ime ihe na-atọ ụtọ n'ihi na onye ọbịa nwere ike ịrịgo n'ọbụ aka ya wee nwee ọmarịcha echiche nke oke ọhịa yana ịse foto na-atọ ọchị n'ebe ahụ. A na-akpọ ihe ọkpụkpọ aha otu onye ọrụ afọ ofufo nke rụrụ ọrụ na otu n'ime ndị ọzọ zoro ezo Refeyim.
N'ime ogige nke ihe dị ka hekta 50 na ọdọ mmiri abụọ jikọtara ọnụ, dị nso na obodo Vallensbæk Mose bụ Little Tilde. Iji wuo ya, Thomas Dambo tụkwasịrị obi na mmekorita nke ndị ọrụ ime obodo abụọ nyere ndị dike aha ha.
Thomas na ugwu
N’ịbụ nke dị n’elu ugwu, Thomas lefuru anya n’otu obodo a na-akpọ Albertslund. Ya mere, onye ọ bụla hụrụ ya ga-enwe ike ịhụ ọmarịcha ọdịdị nke mpaghara dị n'akụkụ ya. Akpọrọ ya aha onye omenkà ahụ n'onwe ya wee wuo ya otu ahụ nwere enyemaka nke otu ndị na-eto eto na-eto eto si n'otu ụlọ akwụkwọ dị n'ógbè ahụ, yana ụfọdụ ndị okenye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Copenhague » Refeyim isii nke osisi Copenhagen
Ihe ị ga-ahụ na obodo Italy nke Siena